ဘုန်းကျော်: 05/01/2012 - 06/01/2012
ဘယ်နေ့ မှာ မီးရစေရမယ်လို့ အစိုးရက တာဝန်ရှိရှိ အာမခံရဲမယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက နောက်ပြန်လှည့်တယ်လို့ ပြောလို့ ရနေပြီ။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ တာဝန်ကျေဖို့ လို နေပါပြီ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, May 26, 2012
"စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ မှုကို ဖွင့်လိုက်လျှင်"
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, May 19, 2012
ဘယ်ကပိုက်ဆံနဲ့ ပွင့်လင်းတာလဲ ကိုမင်းကိုနိုင်
ပွင့်လင်းလူ့ အဖွဲ့ အစည်းကန်ပိန်းလုပ်နေတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ အနေနဲ့အန်ဂျီအိုကနေ ငွေဘယ်လောက်ရတယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လောက်သုံးလဲဆိုတာကို ပြည်သူလူထုကို တင်ပြပေးဖို့ လိုမယ်။ ဒါမှ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပွင့်လင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူများကို ပွင့်လင်းလာအောင်မလုပ်ခင် ကိုယ်က အရင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြစ်စေအောင်လို့ ပါ။ အန်ဂျီအိုက ရတာအပြင် ပြည်သူလူထုဆီက အလှူငွေတွေကိုလည်း တင်ပြပေးဖို့ လိုတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, May 17, 2012
ရေပေးဝေရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန မလိုအပ်ဘူးလား
ဒေါ်လာနှစ်သောင်းကျော်တန်အဝိစိတွင်းသည့်တူးစက် (မြန်မာငွေ သိန်း ၂ဝဝ-ခန့် )
ဒလမြို့ နယ်က ရေထမ်းနေတဲ့ခလေး (Photo-Mizzima)
စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းတွေကို နွေရာသီမှာ ကြားရလေ့ရှိတယ်။ ဒါကတော့ ရေခမ်းခြောက်မှုပဲ ဖြစ်တယ်။ ရန်ကုန်တစ်ဖက်ကမ်း ဒလ မှာဆိုရင် ရေချိူက ရှားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈-နှစ်လောက်က ဒလကိုရောက်ဘူးတယ်။ သူငယ်ချင်းဆီကို သွားလည်တာပါ။ မိုးရာသီမှာ မိုးရေကိုသိုလှောင်ပြီ သုံးရတယ်။ နွေရာသီဆိုရင် ကန်ရေ ကိုသုံးတယ်။ ရေအရည်အသွေးအတော်ညံ့တယ်။ တစ်နေ့ တော့ ရေချိူပြတ်သွားတာနဲ့ ကြုံရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ တစ်အိမ်လုံး ရေချိူးဖို့ ရေမရှိဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
အခုလည်း မီဒီယာမှာ ခဏခဏ ဒီလိုပြသနာတွေကို ကြားနေတွေ့ နေရတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းက ရေပေးဝေရေးမှာလည်း သူတို့ အငြိမ်မနေရဘူး။ သူတို့ က အစိုးရ လုပ်ရမဲ့အလုပ်တွေကို လုပ်နေရပြန်ပြီ။ အစိုးရက ဒီ ပြသနာကို ပေါ့သေးသေးထင်နေလို့ ယနေ့ အထိ ရေပေါတဲ့နိုင်ငံမှာ ရေရှားတဲ့ပြသနာကိုတောင် မရှင်းနိုင်ဘူး။ တကယ်တမ်းဖြေရှင်းချင်ရင်လွယ်လွယ်ပေးပါ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရေအရင်းအမြစ်ပေါကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ မြေအောက်ရေကစလို မြေပေါ်မှာရှိတဲ့ ရေအရင်းအမြစ်တွေရဲ့ တန်ဘိုးကိုသိပြီး စီမံခန့် ခွဲနိုင်ဖို့ အတွက် ရေပေးဝေဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတော့ လိုတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါမှ ပြည်သူတွေရေကောင်းရေသန့် ရရှိပြီး တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ရေအရင်းအမြစ်ကို ထိန်းသိန်းစောင့်ရှောက်နိုင်မှာပါ။ ဒီအတိုင်းသာ မလုပ်ပဲထားရင်တော့ လွန်ခဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝ-လောက်ကတည်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရေရှိပြီး ရေငတ်နေတဲ့ ပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ရေချိူတွေလည်း ပစ်စလက်ခတ်လုပ်တာကြောင့် ကုန်ဆုံးရတော့မယ်။
လူမှာ အရေးကြီးဆုံးက ရေ...ပဲ။ ရေအသက်တမနက်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ရေနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဝန်ကြီးဌာနကို ဖွဲ့ ကြပါ။ မလိုအပ်တဲ့ဌာနတွေကို ဖျက်ပါ။ ဥပမာ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဟာလည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီဌာနအစား ရေပေးဝေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာက ဖွဲ့ တာကမှ ပိုလို့ လူတွေအတွက် အကျိူးရှိစေနိုင်တယ်။ ဘုန်းကြီးတွေအလုပ်ကို ဘုန်းကြီးတွေလုပ်တာ ကောင်းပါတယ်။ လူကသွားပြီး သူတို့ စီမံခန့် ခွဲတာ ဆရာလုပ်တာက အင်မတန်ငရဲကြီးပါတယ်။ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနရှိပြီး ငွေကုန်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ ဘာဝင်ငွေမှ မတိုးတာကိုကြည့်ရင် ဘယ်လောက်နစ်နာလဲဆိုတာကို သိနိုင်တယ်။ ကျနော်ပြောတဲ့ ရေဝန်ကြီးဌာနသာရှိရင် ဒိ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ စီမံခန့် ခွဲမှုနဲ့ ထိန်းသိန်းစောင့်ရှောက်မှု့ ကို ရရှိလိမ့်မယ်။ ရေမရတဲ့နေရာတွေရေရနိုင်တယ်။
သူများတွေ ရေ ရရှိရေးကူညီနေတာကို တွေ့ လည်း ကျနော်လည်းကူညီဖို့ အတွက် တွေးနေမိတယ်။ ကျနော့်အတွေးက မြစ်ချောင်းတွေ အင်းအိုင်တွေကို ပိုက်နဲ့သွယ်တန်းပြီး ရေးပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဝိစိတွင်းကို ခေတ်မှီစက်နဲ့ တူးပေးချင်တဲ့အတွေးပါ။ မြန်မာပြည်မှာ လက်နဲ့ တူးတဲ့ အဝိစိတွင်းအစား အဝိစိတွင်းတူဖို့ စက်တွေကို နိုင်ငံခြားကနေ တင်သွင်းချင်တဲ့အတွေးပါ။ ဒါဆိုရင် နေရာဒေသမရွေး အလွယ်တကူသွားလာနိုင်ပြီး မြန်မြန်လည်းတူးပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်တယ်။
တရုတ်ပြည်က စစ်ကားတွေနဲ့ စစ်လက်နက်တွေကို နဲနဲလောက်လျှော့ဝယ်ပြီး အဝိစိတွင်းတူးတဲ့စက်လေးများဝယ်လိုက်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလို့ ညတုန်းက တွေးမိပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ဒလက လူတွေ ရေကို ဝဝလင်လင် သုံးနိုင်မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံထဲက လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေ ကူညီချင်သူတွေအားလုံးလည်း ကျနော်ပြောတဲ့ စက်လေးများ(Water Well Drilling Machine
) ဝယ်ကြပါလားလို့ ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ လက်နဲ့ တူးတဲ့ အဝိစိတွင်းပုံစံကို ခေတ်မှီနည်းပညာနဲ့ ပေါင်းစပ်ကြတာပေါ့။ ကျနော်လည်း လှူချင်လို့ ပါဗျာ။ရေအကျိူးဆယ်ပါး မတောင်းပဲနဲ့ ပြည့်တယ်လို့ တော့ ကြားဘူးတယ်။ ဒီလိုလှူလို့ဆယ်ပါးကိုလည်း မတောင်းပဲနဲ့ မလိုချင်ပါဘူး။ ရေငတ်နေတာကို မကြည့်ချင်လို့ ပါ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, May 16, 2012
တချိူ့ သော သူငယ်ချင်းတွေက ကျနော် မိုင်းမှာ ဘာလုပ်တာလဲလို့ မေးတဲ့အတွက် အခုလိုဖြေပေးပါတယ်။
Exploration Field Technician or Geological Technician လို့ ခေါ်တဲ့အလုပ်ပါ။ ဌာနက ဘူမိဗေဒ ဌာန ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ကို ရ ဖို့ အတွက် သင်တန်းခြောက်လ တက်ရပါတယ်။ သင်တန်းနာမည်က Certificate III in Mining Exploration ဖြစ်ပါတယ်။ Training and Further Education လို့ အမည်ရတဲ့ TAFE ကနေ သင်တန်းပြီးတော့ နှစ်ပတ်ကို အခမဲ့ မိုင်းမှာ အလုပ်သင်လုပ်ရပါတယ်။ သူတို့ ကြိုက်ရင် အလုပ်ပေးပါတယ်။
လစာကတော့ နှစ်ပတ်လုပ် တစ်ပတ်နားကို ဒေါ်လာ ၇-သောင်းကျော်က စပါတယ်။ တစ်နှစ်စာအတွက်ပါ။ နိုင်ငံတကာက ကျောင်းသားတွေတက်လို့ မရတဲ့သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ Permenmnet Resident ဖြစ်မှ တက်ခွင့်ရှိပါတယ်။
မိုင်းမှာလုပ်တဲ့ အလုပ်တွေကို လိုချင်ရင် ဒီလင့်ကိုသွားပါ။
သဘာဝသိပ္ပံဘွဲ့ လို့ ခေါ်တဲ့ Bachelor of Enviromental Science လည်း မပြီးသေးပါဘူး။ အရက်သောက်တာများပြီးစာမေးပွဲခဏခဏ ကျလို့ စိတ်ညစ်ပြီး နားထားပါတယ်။ အခုတော့ နောက်ထက် Bachelor of Politics and International Studies လေ့လာဖို့ စာရင်းသွင်းထားပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရင်း အဝေးသင်လုပ်ပေါ့။ နားတဲ့အချိန်မှာ အပျင်းပြေ အရက်သောက်ရင်း စာဖတ်ချင်လို့ ပါ။ ဘွဲ့ ရတာ မရတာ အပထား ၊ အနည်းဆုံး ဗဟုသုတတော့ ရ မယ်လို့ ထင်လို့ ပါ။
ကျနော်ပညာရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ကူးတည့်တာကို လုပ်တဲ့ လူတစ်ဦးပါဗျာ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, May 15, 2012
သမတက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ပြန်လာပါဆိုလို့သြစတျေးလျဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးမှာ ဗီဇာလျှောက်တယ်။ သုံးလပိုင်း ၁၃-ရက်နေ့ ကစပြီး သင်္ကြန်မှာ အမှီပြန်နိုင်မယ်ထင်ပြီး လျှောက်လိုက်တာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က အထိ ဘာမှ အကြောင်းမထူးပါဘူး။ ဒီတော့ စိတ်ပျက်ပြီး ကန်ဆယ်ပြန်လုပ်ရပါတော့တယ်။ စီစဉ်ထားတာက တမျိူး ဖြစ်လာတာက တမျိူးဆိုတော့။ အလုပ်က ခွင့်တောင် ယူပြီးမှ ဗီဇာတင်ထားပါတယ်။ အခုတော့ ဘာမှ အကြောင်းမထူးပါဘူး။
အခုလည်း နိုင်ငံတော် သမတက ပြည်ပရောက်တွေကို ပြန်လာပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပြန်ပြီ။ သူကတော့ ပါးစပ်ကပြောတာလွယ်ပါတယ်။ ပြန်လာစေချင်ရင် လူတိုင်းကို အလွယ်တကူ ဗီဇာရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုတယ်။ ဥပမာ ထိုင်း စင်္ကာပူနဲ့ မလေးရှားလိုမျိူး ဘာဗီဇာမှ မလိုပဲ တံခါးမရှိ ဒါးမရှိ ဝင်ထွက်နိုင်စေတဲ့စနစ်ပါ။
အခုတော့ဗျာ....မြန်မာပြည်က ဗီဇာရဖို့ အတွက် ဖြည့်ရတဲ့ဖောင်၊ ငွေလိုက်တဲ့ငွေ၊ စောင့်လိုက်ရတဲ့ အချိန်ကာလ၊ သံရုံးကို ဆက်လိုက်ရတဲ့ဖုန်းခတွေသာပေါင်းကြည့်ရင် ဗီဇာရတာနဲ့ တောင် မတန်ဘူး။
ဒီစနစ်တွေကို ပြောင်းနိုင်ရင်တော့ သမတရဲ့ ပြန်လာပါဆိုတဲ့စကားက သဲထဲရေသွန်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့....ဦးသိန်းစိန်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, May 13, 2012
ကျနော်တို့ တစ်ခုတော့ပြောစရာရှိလာပြီ။ ဒါကတော့ ပါလီမန်ထဲမှာ ၂၅% ကိစ္စပါ။ ကျနော်တော့ သူတို့ ပါနေတာကို သဘောတူချိန်ရောက်လာသလို ခံစားရနေပြီ။ ကြိုက်တယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ တွေရဲ့ မျက်နှာပေးအရနဲ့ အတိတ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ပုံစံအရ သူတို့ အတွက် အတွေ့ အကြုံရှိဖို့ လိုနေတယ်လို့ ထင်တယ်။ နည်းနည်းရှုပ်သွားလားမသိဘူး။
၂၅% ဆိုတာက လူဦးရေနဲ့ တွက်ရင် အများကြီးပဲ။ သူတို့ တွေလေးငါးနှစ်အတွင်း ပါလီမန်အတွေ့ အကြုံရသွားလိ့မ်မယ်။ ဒါနဲ့ တဆက်တည်း နောင်တက်မဲ့ သူတို့မျိုးဆက်သစ်တွေကို စစ်တပ်က သယ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်။
ပါလီမန်ထဲမှာ ဆက်ထားရင် အရပ်သားတွေရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အရည်အချင်းကို သိသွားလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာကို နားလည်သွားလိမ့်မယ်။ ဆိုတော့ ဒီပုံစံအတိုင်းကို လေးငါးဆယ်နှစ်ဆက်သွားဖို့ လိုအပ်နေတယ်။ လိုတယ်ပဲ ပြောချင်တယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ တခါတည်း လိုချင်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ မျက်နှာပေးတွေအရ အသံတွေအရ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ တခုခုဖြစ်ရင် လက်ပါချင်နေတဲ့ လူတွေဆိုတော့ဗျာ။ ပြောင်းတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘက်ကသာ ဆက်ရွေ့ ပါ။ ဒါမှ သူတို့ နားလည်လိမ့်မယ်။
နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ ဘာမှ ပြောစရာမရှိအောင် ဒေါင့်စေ့အောင်သူတို့ အလုပ်ကို လုပ်သွားလိ့မ်မယ်။ လုပ်နေတယ်လို့ ပဲ မြင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတော့ရှိတယ်....ဖင်ခေါင်းမကျယ်ဖို့ လိုသလို၊ ဘ၀မမေ့ဖို့ လိုတယ်။
ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အပေါင်းအပါတို့ဒီအတိုင်းဆက်ပြီးပြောင်းပါ။
Credit to အိတုံ
မနာလိုစိတ်ကြီးတဲ့ ဥက္ကဌ အောင်မိုးဇော်
ကိုစိုးမိုးဆိုတာက လူ့ ဘောင်သစ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးပါ။ သူက ဗမာပြည်ကို အလည်သွားတယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ တို့ နဲ့ တွေ့ သလို၊ ဒေါ်စုနဲ့ တွေ့ တယ်။ ဒီကိစ္စကို ကိုအောင်မိုးဇော်က ဘာပြောလဲဆိုတော့...ဒီကောင်က ဘာကောင်မို့ လို့ လဲတဲ့...။ ဆိုတော့ ပါတီခေါင်းဆောင်ဟုခေါ်သော ဥက္ကဌကြီးရေ....ခင်ဗျား ဘ၀ကို ပြန်ကြည့်ပါလို့ ပဲ ပြောချင်တယ်။
Dear Ko Aung Ko and colleagues from DPNS-USA branch,
Please see the attachment which is the clarification of Soe Moe on his trip to Rangoon. The clarification is fairly good but I am extremely unhappy with his writing about me. The way he wrote is extremely tricky. I see it as an insult. I want his clarification on this.
I request you to add this in this afternoon meeting agenda.
All the best, AMZ
လေးစားရပါသောပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ကိုငွေလင်းနှင့် ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင်များ ပါတီစည်းရုံးရေးမှုးများခင်ဗျား-
ကျနော်ရဲဘော် စိုးမိုးမှ ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးးမှုးဆီမှ ၄လပိုင်း (၂၇)ရက် နေ့တွင်ရရှိသော စာတွင်ပါရှိသောမေးခွန်းများ နှင့်ပြန်လည်ဖြေကြားရန် ယခုစာကို လေးစားစွာဖြင့်တင်ပြရေးသားပါသည်။ ကျနော်မြန်မာ နိုင်ငံသို့ မတ်လစောစောပိုင်းကပြန်သွားခဲ့ပါသည်။ ပြန်သွားလည်ပတ်ခဲ့သော အကြောင်းအရင်း များစွာရှိပါသည်။
၁) အသက်အရွယ်အိုမင်းနေပြီဖြစ်သော မိဘနစ်ပါးတို့နှင့်သွားတွေ့ရန် (ကျနော့်အဖေမှာ အသက် ၈၀ ရှိပြီး အမေမှာ အသက် ၇၆ ရှိပါပြီ)
၂) နစ်ပေါင်းနစ်ဆယ်ကျော်ခွဲခွာခဲ့ရသော ညီအစ်ကိုမောင်နများနှင့်သွားတွေ့ ရန်
၃) နစ်ပေါင်းနစ်ဆယ်ကျော်ခွဲခွာခဲ့ရသော နိုင်ငံရေးလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းများနှင့်သွားတွေ့ ရန်
၄) နစ်ဘက်မိဘတို့စီစဉ်မှုများအောက်တွင် မိမိရွေးချယ်ထားသော ချစ်ရသောသူနှင့် အိမ်ထောင်ပြု မင်္ဂလာသွား ဆောင်ရန် အပြင်
၅) မြန်မာပြည်တွင်းအခြေအနေများကို လေ့လာအကဲခတ်ရန် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မည့် ကော့မှုးနှင့် အန်အယ်ဒီဝင်အရွေးခံမည့် လှည်းကူးမြို့များသို့သွားရောက် လည်ပတ်ရန်
၆) ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလ နှင့် ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေကိုလေ့လာရန်
ရ) နာဂစ်မုန်တိုင်းဒါဏ်ကို အပြင်ထန်ဆုံးခံခဲ့ရသော ကွမ်းခြံကုန်းသို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်
စသည့်ရည်မှန်းချက်အစီအစဉ်များဖြင့် သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုခရီးစဉ်မှာ မိမိဘ၀နှင့် ဆိုင်သော အဆုံးအဖြတ်ကိစ္စများပါသဖြင့် မိမိအတွက်အရေးကြီးပြီး အစစ စွန့်စားခဲ့ရသော ခရီးစဉ်တခု လည်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ရာတွင် လုံခြုံရေးနှင့် ခရီးစဉ်ဖြစ်မြောက် ရေးတခုထည်းကိုသာ ရည်မှန်းပြီး ကိုအောင်ကိုနှင့် ကိုဝင်းမြင့်နိုင်တို့နှင့် အနည်းငယ်ပြောဆို တိုင်ပင်သွားသည်မှလွဲပြီး ပါတီ ဗဟိုကော်မတီကိုသော်လည်းကောင်း လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက် တစ်ပါတီ (အမေရိကန်ဌာနခွဲ) ကို သော်လည်းကောင်း တင်ပြခြင်း အကြောင်းကြားခြင်း မပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ သို့ရာတွင် ခရီးစဉ်မတိုင်မီ- တယ်လီဖုန်း ကွန်ဖရန့်မှတဆင့် ရဲဘော်များအား အမေရိကန်ဌာနခွဲ တွင်ယူထားသော တာဝန်မှနုတ်ထွက့်မည့် အကြောင်းနှင့် နုတ်ထွက်ခွင့်ပေးရန် ထိုနေရာတွင် ကိုဝင်းမြင့်နိုင်အားတာဝန်ပေးရန် တင်ပြခဲ့ပါသည်။ နုတ်ထွက်ရခြင်း အကြောင်းမှာ မိမိမှာ အလုပ်များလွန်းကာ တာဝန်မယူနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ရဲဘော်များက မိမိအား ချက်ချင်း နုတ်ထွက်ခွင့် မပေးပဲ နောက်မှစီစဉ်လုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင် မိမိအနေဖြင့် ကိုအောင်ကိုတို့ ကိုဝင်းမြင့်နိုင်တို့ကို ထိုနေရာလောက်လေးတွင်သာမကပဲ အနာဂတ် မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးတွင်လည်း သူတို့အခန်းကို အများကြီးမျှော်မှန်းထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့သွားရောက်ရန် လျှောက်ထားခဲ့သည့် ဗီဇာမှာ ဆိုရှယ်ဗီဇာဖြစ်ပြီး ဗီဇာရရှိ၇န် နစ်လခန့် စောင့်ခဲ့ရပါသည်။
ကျနော့်အမျိုးသမီးနာမည်မှာ မအိအိအေးဖြစ်ပါသည်။ သူမမှာ စင်ကာပူတွင် လက်ရှိနေထိုင် အလုပ်လုပ်နေကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ လုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံရေးကို မျက်ခြေမပြတ်ပဲလေ့လာနေကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံအားပေးနေသော မွန်တိုင်းရင်းသူ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ သူ့မအမေက နာဂစ်ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသော ရွာများပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင် ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေသော သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ကာ သူ့အဖေက စာပေထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးကို လုံးဝထောက်ခံအားပေးနေသော မိသားစုဖြစ်ပါသည်။ အန်အယ်ဒီ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရမည်ဟု ကျနော်တို့မျော်မှန်းခဲ့သောကြောင့် အန်အယ်ဒီ အနိုင်ရသည့်နေ့ကို ညစာစားပွဲဖြင့်ပျော်ပျော်ကြီးဂုဏ်ပြုရန်ရည်ရွယ်ပြီး ကျနော်တို့ မင်္ဂလာအခန်းအနားကို ဧပြီလ(၁)ရက် နေ့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသောနေ့တွင် တမင်စီမံရွေးချယ်ပြီး ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့တွင် အန်အယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲတွင်နိုင်သည့်အတွက် တက်ရောက်လာသည့် သူများမှာ (အများစုမှာစာပေ လောကမှဖြစ်သည်) ပျော်လွန်းသဖြင့် အောင်ပွဲဆင်ရန် အခြားလူများကိုပါခေါ်ဆောင်လာရာ လူ (၅၀၀) ခန့်ဖြစ်သွားပြီး မင်္ဂလာပွဲ လူလျှံသွားပါသည်။ ကျနော်တို့လည်းပျော်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်တလတာနေထိုင်ခဲ့သော ထိုကာလများတွင် မိဘများ ညီအစ်ကိုမောင်နမများ သူငယ်ချင်းများ အန်ဂျီအိုလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်နေသောသူများ နိုင်ငံရေးအကျော်အမော် များနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ရပြီး ရွေးကောက်ပွဲကာလကို အနီးကပ် အကဲခတ်ခွင့် ရခဲ့သောကြောင့် ကျနော်တို့အတော်ကြီးပျော်ခဲ့ရပါသည်။ ပြန်တောင် မပြန်ချင်ခဲ့ ပါ။ ထိုအချိန်တွင် ပါတီရှိရဲဘော်ရဲဘက်များအားလုံးကို အတော်ကလေးသတိရခဲ့ပြီး သူတို့ အားလုံးကိုလည်း ကျနော့်လို သူတို့ချစ်သောသူများအားလုံးနှင့် ဆုံစည်းစေလိုသော ဆန္ဒများ များစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါသည်။ ကျနော့်ကဲ့ သို့ မိသားစုများပြန်လည်ဆုံစည်းကြရန်လည်း ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တွင်ရှိနေစဉ်ကာလများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုမင်းဇျေယျာနှင့် အခြား၈၈ မျိုးဆက်သစ်များခေါင်းဆောင်များအားလုံး အပြင် ယခင်လူ့ဘောင်သစ် တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ကိုဇေယျတို့အားလည်း သွားရောက်တွေ့ဆုံနုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသူများအားလုံးကို မိမိရင်ထဲအသည်းထည်းမှ လေးစားသမှုဖြင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး သူတို့အမြင်များ ခန့်မှန်းချက်များကို လေ့လာရန်လည်း ပါပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာတွင်လည်း တစုံတရာသော Risk ကို ယူပြီှးလုပ်ဆောင်ခဲ့ရသော်လည်း ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတို့အတွက် အတော်ကလေး ကြေနပ် ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ချုပ်ရသော်- ကျနော်၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်သည်
ကျနော့် မိဘများမဆုံးပါးခင် သူတို့အား သွားရောက်တွေ့ဆုံနေထိုင်ပြုစုကာ နစ်ဘက်မိဘများ သဘောကျစီမံမှုဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ခြင်း (ထိုကိစ္စကို အလွန်တန်ဘိုးထားပါသည်)၊ မိမိ ညီအစ်ကိုမောင်နမများ သူငယ်ချင်းများနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံခြင်း၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် သွားရောက် တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်ပြီး (စဉ်းစားစီမံသလိုဖြစ်လာခဲ့သောကြာင့် မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူမိကာ ၀မ်းသာ ပီတိဖြစ်ရ ပါသည်) (ထို့အပြင် အလူအတန်းများစွာတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ၈၈ မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားများအဖွဲကို ငွေသားတစ်သိန်းနှင့် ကျနော့်စာအုပ်စင်တွင်ရှိသော နိုင်ငံရေး ငြိမ်းချမ်းရေး ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော စာအုပ်များအားလုံးကို ကိုကိုကြီးထံတွင် တိုက်ရိုက်လူဌာန်း ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်အန်အယ်ဒီမှ ထောင်ထားသော BG သွေးလှုအဖွဲအားလည်း ငွေတစ်သိန်း၊ နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒါဏ်ခံထားရသော ရွာများအားအကူအညီပေးနေသည့် ကွမ်းခြံကုန်း ဘုန်းတော်ကြီး အား ငွေတစ်သိန်း၊ ကွမ်းခြံကုန်းရှိရွာတစ်ရွာတွင် ယဉ်ကျေးလိမ်မာ စာသင်ကျောင်း ဖွင့်တားသော ဦးဇင်းအား ငွေငါးသောင်း၊ ဒဂုံတွင် ယဉ်ကျေးလိမ်မာ စာသင်ကျောင်း ဖွင့်တားသော ဦးဇင်းအား ငွေငါးသောင်း၊ ကွမ်းခြံကုန်းရွာတစ်ရွာတွင် မီးစက်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရေးအတွက်ငွေ သုံးသောင်း၊ စင်ကာပူဘုန်းကြီး ကျောင်းအား ဒေါ်လာသုံးရာ လှုဒါန်းခဲ့ပြီး နစ်ဘက်မိဘနစ်ပါးတို့ကိုလည်း ဒေါ်လာ တစ်ထောင်ကျော်စီ ကန်တော့ခဲ့ပါသည်။ ညီအစ်ကိုမောင်နမများကိုလည်း ပေးကမ်းစောင့်ရှောက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကုသိုလ်တို့ အတွက်အားလုံးကို အမျှပေးခဲ့ပါသည်။)
ယနေ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရှိ မည်သည့် ပုဂိုလ်များနှင့်မှ တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း မရှိပါ။
လုံခြုံရေးနှင့် ခရီးစဉ်ဖြစ်မြောက်ရေးတခုထည်းကိုသာ ရည်မှန်းခဲ့သောကြောင့် ပါတီသို့ တင်ပြခြင်း အကြောင်းကြားခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။
ထိုခရီးစဉ် တင်ပြမှုနှင့်တဆက်ထည်း ယနေ့မြန်မာပြည်လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အတွေ့အကြုံများ အမြင်များကို ပါတီခေါင်းဆောင်များသိရှိရန် အောက်တွင်ဝေမျှ တင်ပြထားပါသည်။ ပါတီအတွက် အကျိုးတစုံတရာရှိမည်ဟု ယူဆပြီး မိမိမြင်ခြင်း သိခြင်းတို့ကို ရိုးရိုးသားသား အစွဲကင်းကင်း ခံစားမှုကင်းကင်းတို့ဖြင့် တင်ပြထားပြီး ရဲဘော်ကြီးများ အားလုံး ချင့်ချိန်စဉ်းစားသော အသိ ညဏ်ဦးနှောက်များနှင့် လေ့လာဖတ်ရှုစေလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျနော်အမေရိကန်သို့ရောက်ပြီး မကြာခင်မှာပင်- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် ကိုကိုကြီး၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုမင်းဇျေယျာ နှင့် အခြား၈၈ မျိုးဆက်သစ်များခေါင်းဆောင်များအားလုံးအပြင် ယခင် လူ့ဘောင်သစ်တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ကိုဇေယျတို့အားကျနော် သွားရောက် တွေ့ဆုံနုတ်ဆက်ခဲ့ခြင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကိုအောင်မိုးဇော်မှ အတော်ကလေးမကျေနပ်ကြောင်းကြား သိရပါသည်။ "ကိုကိုကြီးတို့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နှင့် သွားတွေ့ရအောင် ဒီကောင်က ဘာကောင်မို့လည်း" ဟု ရဲဘော်များနှင့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဒေါသဖြင့်ပြောဆိုသွား ကြောင်းလည်း ကြားရပါသည်။ ထိုသို့ကြားသောကြောင့် အစတော့ ကျနော်လည်းအတော်စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်ကာ အကုသိုလ်များခဲ့ရပါသည်။ နောက်မှ တရားနှင့်ပြန်ဖြေပြီး သူ့၏ကောင်းကွက် ကလေးများကို ကြိုးစား ပြန်ကြည့်ပြီးဖြေယူခဲ့ရပါသည်။ သူ၏ယခုလို စဉ်းစားချက်နှင့် မဆင်မချင်ပြောဆိုမှုအပေါ် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာကလွဲပြီး သူအားဒေါသမထွက်မိတော့ပါ ။
ခေတ်မှီပွင့်လင်းလာသော ယနေ့မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကနှင့် ယနေ့ပြည်သူလူထု
ပြည်တွင်းရှိခေါင်းဆောင်များကို ကျနော်ဂါဝရပြုတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တခုပြောချင်လာ တာရှိပါ သည်။ ကျနော့်လို နိုင်ငံရေးကိုနစ်ပေါင်းများစွာလုပ်လာခဲ့သူပင်မဆိုထားနှင့် ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ သား အယုတ် အလတ်အမြတ်မရွေး မည်သူမဆို ကိုကိုကြီးတို့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အား တွေ့ချင်လျှင် အချိန်မရွေး သွားရောက်တွေ့ဆုံစကားပြောလို့ရပါသည်။ ခေတ်မှီပွင့်လင်းပြီး အကြောက် တရားများနည်းပါးလာသော ယနေ့မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကတွင် ထိုကိစ္စမှာ လုံးဝထူးဆန်းသောကိစ္စ မဟုတ်တော့ပဲ လုပ်သင့်သောကိစ္စများ အားပေးရမည့်ကိစ္စများဖြစ်လာပါသည်။ ကျနော့်အဖိုတော့ ၈၈ မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ကိုကိုကြီးတို့နှင့် လက်တွဲ လုပ်ဆောင်နေသောသူအချို့မှာ ကျနော့်နှင့်လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်များလည်းဖြစ် အလွန်လည်းရင်းနီးသော သွေးသောက် သူငယ်ချင်းများဖြစ်သည့်အတွက် ထိုခေါင်းဆောင်များကို တွေ့ချင်လျှင်အချိန်မရွေးတွေ့နိုင်သော အနေအထားတွင်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျနော့်အမအရင်းနှင့် အကို အမ (၀မ်းကွဲ)များမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အနီးကပ် အချိန်ပြည့် လုပ်အားပေးဝန်းရံခြင်း အားဖြင့် မိုးထဲရေထဲ နိုင်ငံရေး ခရီးကြမ်းတွင်နစ်ပေါင်းများစွာ ကူညီထောက်ခံ ၀န်းရံနေသောသူများဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းခဲ့မှုများအရ ပြည်ပရောက် အဖွဲ့အသီးသီးရှိ မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် အတော်များများက အခြား အဖွဲ့အစည်းမှခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့သည့်အခါ-- ဒါသူတို့ပဲလုပ်ရမည့်သူတို့ပိုင် အလုပ်သဖွယ် ခံယူလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး အောက်ခြေရဲဘော်များနှင့် အခြားအဖွဲများမှ ခေါင်းဆောင်များကို ပေးမတွေ့ မိတ်မဆက် ပေးတော့ပဲ ဘယ်ကိစပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ချည်း ကြိတ်ဝိုင်းတွေ့လုပ်ကာတွေ့ကြပါသည်။ ဒါတွေကအမှန်တွေဖြစ်ပြီး လူတိုင်း ရဲဘော်တိုင်းလည်းသိကြပါသည်။ ယခင်ကဒေါ်ကန်ခဲ့သော်လည်း သို့သော် ယခုအချိန် အသက်အရွယ်ရောက်သောအခါတွင် ကျနော့်အနေဖြင့်ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မတင်လိုပဲ ထိုခေါင်းဆောင်များ နိုင်ငံရေးအရတကယ့်ကို နားမလည်ခဲ့ကြသောကြောင့် လုပ်ခဲ့ကြသည်ဟု ယေဘူ ယျသဘောဖြင့် ကျနော်မြင်မိ မှတ်ချက်ချမိပါသည်။
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလောကတွင်တော့ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကိုမဆို ဘယ်ခေါင်းဆောင်ကို မဆို တွေ့ချင်လျှင် အလွယ်တကူတွေ့နိုင်သော ခေတ်မှီသော ပွင့်လင်းလာသောခေတ်ကို တဖြည်းဖြည်း ရောက်လာနေပြီဖြစ် ပါသည်။ မည်သည့်ပါတီက ခေါင်းဆောင်မဆို လူထုအားအိမ်တိုင်ယာရောက် လိုက်လံစည်းရုံးနေရသော ခေတ်ကို တစတစရောက်လာပြီဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူများလည်း နိုင်ငံရေး အသိဗဟုတထုသတိုးပွားလာနေပါပြီ။ ခေါင်းဆောင်များကလည်း မည်သူ့ကိုမဆိုလက်ခံစကားပြော တွေ့ဆုံကြပါသည်။ ယနေ့ ဒီဘက်က ခေါင်းဆောင်များ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးကိုထိထိရောက်ရောက်အောင်အောင်မြင်မြင်ဆက်လုပ်လိုပါက ထို့ စဉ်းစားချက်အဟောင်းများကို စွန့်ပစ်ကြဘို့ စဉ်းစားချက်များလုပ်ဆောင်ချက်များခေတ်မီကြဘို့ လိုသည် ဟုမြင်မိပါသည်။
ယနေ့မြန်မာနိင်ငံရေးတွင် မြန်မာပြည်သူများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား "အမေ" "အမေ" ဖြင့် ခေါ်ဆိုကြကာ ဘာကြောင့်များ ရင်ထဲအသည်းထည်းကနေ ချစ်မြတ်နိုးကြသလည်းဆိုသည်ကို ကျနော် လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ကျနော်သိထားခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ ဟိုးယခင်က ထည်းက ပွဲတစ်ခုလုပ်လျှင် အောက်ခြေသိမ်းလုပ်သော အနစ်နာခံသော ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်.။ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဧည့်ခန်းထဲမှာ စင်ပေါ်မှာ စကားပြော နေယုံမကပဲ မီးဖိုခန်းထဲမှ ချက်ပြုတ် ကြွေးမွေးကြသော သူများအားလည်း တွေ့ဆုံနုတ်ဆက် ကျေးဇူးတင် စကားပြောတတ်သော ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ အတုယူစရာဖြစ်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲကာလများအတွင်းကဆိုလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့အား ပန်းစည်းဆက်ချင်သောသူများအားလုံးလိုလိုထံမှ ပန်းစည်းများအား
"ပန်းစည်းပေးချင်တယ်မို့လား လာခဲ့လာခဲ့ လာလာ ဒီကိုလာပေး ဒီကိုပေး"
ဟုဆိုကာ ပန်းစည်းများအား ရနိုင်သလောက် အတင်းရအောင်ယူ ကာကားထဲအကုန်ထည့်သယ် ပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူအများကလည်း အလွန်ဝမ်းသာပျော်ရွှင် ကျေနပ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးတွေ ကလေးမလေးတွေအတော်များးများက ပန်းစည်းကလေးများကိုင်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အားတွေ့ သောအခါ ရင်ခုန်ကြည်နှုးလွန်းသဖြင့် ကြက်သေသေပြီးတုန်နေကြကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နား မကပ်ရဲပဲ ရှိနေတတ်ကြပါသည်။ ထိုအခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အတင်းရအောင်ခေါ်ကာ ပန်းစည်း များကို ရယူသဖြင့် ပန်းစည်းပေးခွင့်ရသောသူများ ၀မ်းသာကြကာ မျက်ရည်များပင်ကျကြပါသည်။ ကျနော် ကိုယ်တိုင် ဒေါ်စုကိုပန်းစည်းပေးနိုင်ခဲ့သော သူအမျို့နှင့် စကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပြီး သူတို့ခံစားချက်ကို သိရှိလေ့လာနိုင်ခဲ့ ပါသည်။ ကျနော့်ကိုစကားပြောနေချိန်တွင် သူတို့မျက်လုံးကလေးများမှာ ထိုကာလအား ပြန်လည်တမ်းတ လွမ်းဆွတ်မှုတို့ဖြင့် အမှတ်ရနေကြသည်.ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပါသည်..ကျနော်သေချာတာ တခုတောရှိပါသည်.. ထိုအတွေ့အကြုံ အဖြစ်အပျက်များကို သူတို့သေသည်အထိမေ့နိုင်ကြမည်မဟုတ်ပါ.။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားပြည်သူက အမေ ဟုခေါ်ကြပါသည်။ သူတို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ သူတို့ချစ်မြတ်နိုး နာခံရသော သူတို့အမေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြပါသည်။
ကျနော့်အမ တစ်ယောက်ဆိုလျှင် ဆယ်တန်းပင်မအောင်ပါ။ ခေတ်ပညာများများစွာမတတ်ပါ။ သို့သော် နိုင်ငံရေးလုပ်ကတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသော သူ့မောင်ကျနော့်အားလေးစားသဖြင့် ငယ်စဉ်က ကျနော်အပြင်းပြေ ထုလုပ်ခဲ့ဘူးသော ဘုရားပုံလေးကို အချောသတ်ပြီးရွှေချကိုးကွယ်ထားပါသည်။ ကျနော်အိမ်မှ ထွက်သွားပြီး ကတည်း ကနိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့ရာ သူသည်ယနေ့အချိန်တွင် ဒီမိုကရေစီလုပ်ရှားမှု အတွင်းတွင် အလွန် တက်ကြွသော အလွန်အလုပ်လုပ်သော အန်အယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိရေးအတွက် အပြင်း အထန်အလုပ်လုပ်ခဲ့သော သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေသည်ကို ကျနော်အံ့သြစွာတွေ့ရပါသည်။ သူသည် ဦးကျော်သူတို့အဖွဲ့အတွက် လစဉ် (၆) သိန်းခန့် ရှိသောငွေကို ကောက်ယူစုဆောင်းပေးနိုင်သော သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တည်ထောင်ထားသော သွေးလှုဒါန်း ရေးအဖွဲ BG အဖွဲ့တွင်လည်း အချိန်ပြည့် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေပြီး သွေးအလှုရှင်များနှင့် သွေးလိုနေသော လူနာများကို ဆက်စပ်ပေးနေနိုင်နေသော သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အမေ ဟု ခေါ်ပါသည်။ အစပိုင်းက ကျနော်တောင်ကြားရတာတမျိုးကြီးဖြစ်နေပါသည်။ ကျနော်ကိုယ်ကျနော် တောင် ထိုသို့ခေါ်ဘို့နုတ်မရဲသော သူတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။ ကျနော်က ဒေါ်စုဟု ခေါ်လျှင် အန်တီဟုခေါ်လျှင် လူငယ်များက မကြေနပ်သောအကြည့်ဖြင့် ကြည့်ပါသည်။ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရေး လောကတွင် ပြည်သူလူထုအများစုကြီးသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နောက်မှ အခိုင်အမာ မားမားမှတ်မှတ် ရပ်ထားကြပါပြီ။
အန်အယ်ဒီပါတီ၏စည်းရုံးလှုပ်ရှားမဲဆွယ်မှုတို့သည် အားမရစရာများရှိနေသေးသော်လည်း အလွန်စနစ် ကျနပြီး ပြည်သူလူထုကလည်း စည်းနှင့် ကမ်းနှင့်ခေတ်မှီစွာစနစ်ကျနစွာ စုရုံးထောက်ခံကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အနုပညာသည်များကလည်း အန်အယ်ဒီအနိုင်ရရှိရေးအတွက် လူထုကြား ပညာပေးစည်းရုံး ထောက်ခံမှုကို လည်း အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ဆောင်ကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
သူတို့ကတော့ စစ်အုပ်စုကပေါက်ဖွားလာတဲ့ပါတီဖြစ်တာမို့ အရင်းအနီးများများနဲ့ နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး စုစည်း တည်ထောင်ထားသည့်အောက်မှာ ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် ဒုတိယအင်အား အကြီးမားဆုံးပါတီ အနေဖြင့်တွေ့နေရသေးပါသည်။ သူတို့အားအတတ်ပညာအရကူညီပေးနေသူများလည်း အများကြီးရှိပါသည်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်အများစုက အန်အယ်ဒီကို မဲပေးလိုက်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လူထုအားစည်းရုံးမည်ဆိုလျှင် ထိုအချက်မှာ အထူးသတိထားရ မည့်အချက်ဖြစ်ပါသည်။
၈၈ မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ နှင့် အခြားနိုင်ငံရေးအင်အားစုများ
လောလောဆယ် နိုင်ငံရေးပါတီထောင်မည်မဟုတ်ဟု သိရှိလေ့လာရပါသည်။ အန်ဂျီအို လိုလုပ်ငန်းမျိုးများဖြင့် Capacity Building လုပ်ငန်းများ လူသားချင်းစာနာညာတာထောက်ထားပြီး အကူအညီပေးခြင်း နှင့်ဆိုင်သော လူမှုကူညီစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ပညာရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခြင်းမှ တဆင့် လူထုစည်းရုံးတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်သွားမည်ဆိုသည့်သဘောကို လေ့လာသိရှိရ ပါသည်။ သူတို့ထည်းတွင် သဘောထား အမြင်ကွဲလွဲမှုအချို့လည်းရှိပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းတို့ တွင်ဖြစ်တတ် သော သဘောအရဆိုလျှင်မဆန်းပါ။ ကိုကိုကြီး ၏ ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍသည် အဖွဲ့တွင် ပိုအားကောင်းလာနေ သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကိုကိုကြီးကို ဘက်စုံရသော နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်အဖြစ် လေ့လာ သိရှိရပါသည်.။
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟု ပြောလိုက်လျှင် ၈ လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုကြီးအတွင်းတွင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့သော နိုင်ငံရေးသမားအချို့ကလွဲပြီး ပါတီတွင်လှုပ်ရှားပါဝင်ခဲ့သော ပါတီဝင်များမှလွဲ၍ လူအတော် များများကမသိကြတော့ပါ။ သိတဲ့သူများကလည်း "လူ့ဘောင်သစ်ဆိုတာ မိုးသီးဇွန်ထောင်တဲ့အဖွဲ့လား။ မိုးသီးဇွန်က မိုးသီးက မြောက်ပိုင်းမှာ လူအတော်များများ သတ်ထားတဲ့ အမှု့နဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆို..." ဆိုပြီး ထိုမေးခွန်းမျိုးဆန်ဆန် လေးငါးကြိမ်အမေးခံရပါသည်။ ထိုသို့မေးသူများတွင်- ၈၈ မျိုးဆက်သစ်အင်အားစုထဲမှ အချို့လည်းပါပါသည်။ တချို့က ယနေ့ပြည်တွင်းက မြန်မာလူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလား ဟုမေးကြပါ သည်။ ကျနော့် အတော်ဖြေရှင်းခဲ့ ရပါသည်။
၈၈ မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားအချို့အပါအ၀င် ကျနော်ထိတွေ့ခဲ့ရသော ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသော လူထုနှင့် နိုင်ငံရေးသမားအများစုက ပြည်ပရောက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများကို လုံးဝအထင်မကြီးကြသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။ အတော်များများက ပြည်ပရောက်အဖွဲ့များကို မညီညွတ်သော ပျက်စီးနေသော ခြစားနေသော ငွေအလွဲသုံးစားလုပ်သော အဖွဲ့များအဖြစ်မြင်နေ ကြပါသည်။
ပါတီအနာဂတ်အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိတွေ့ဆုံခဲ့သည့်သူအများစုအပေါ် အင်အားစုများအပေါ် လေ့လာ တွေ့ကြုံလာခဲ့ရမှုများပေါ် တွင်အခြေခံပြီး ယခုလိုနိဂုံးချုပ်မိပါသည်။
နစ်(၂၀) အတွင်း ကျနော်တို့ပါတီ နယ်စပ်တွင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ နှင့်ယနေ့ပြည်ပ မီဒီယာတချို့၏ အသိအမှတ်ပြုမှုကို အတိုင်းအတာတခုအထိရလိုက်သော်လည်း ပြည်တွင်း လူထုနှင့် နစ် (၂၀) ကျော် အဆက်ပြတ်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ မိမိတို့လူ့ဘောင်သစ်ကို ပြည်သူလူထုအများစုကြီးက အသေအခြာ မသိကြတော့ပါ။ ယခုလို ကျနော့်ဆီက ဒီစကားကိုကြားလို့ ၀မ်းနည်းခြင်း ကျနော့်ကို စိတ်ဆိုးခြင်း မဖြစ်စေချင်ပါ။ ကျနော်ပြောတာကိုယုံပြီး ချက်ချင်း လည်း မဆုံးဖြတ်စေလိုပါ။ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ်ဝင်ပြီး စုံစမ်းကြည့်ပါဟုပြောလိုပါသည်။ ထိုမှသာ လက်တွေ့ကျသော နိုင်ငံရေးကို အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်နိုင်ပါမည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အန်အယ်ဒီကလွဲလျှင် လူထုအများစုက ဘယ်ပါတီ ဘယ်အဖွဲ့ အစည်း အသံကိုမှမကြားနိုင်တော့ပါ.။ အစဉ်အလာကြီးလှသော လက်ရှိအစိုးရကြောက်သော နိုင်ငံရေး သမားများနှင့် ပြည်သူ့ထောက်ခံမှုရရှိထားသော ၈၈ မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသား များအဖွဲ့သည်ပင်လျှင် ယနေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုအရှိန်အဟုန်က အတော်ကြီးလွန်းသောကြောင့် မိမိတို့ပုံရိပ်များ ပြည်သူတွင်းဆက်ရှိနေရေးကို အတော်အရှိန်ယူပြီးလုပ်ယူနေရပါသည်။ တခုကောင်း သော အချက် မှာ ၈၈ မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်တို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လှုပ်ရှားမှုကို ယနေ့တိုင် ချိတ်ဆက် ထောက်ခံ ၀န်းရံထားကြခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့အားဖြင့်လည်း သူတို့က လူထု ထောက်ခံမှုကို ရရှိကြပါသည်။
ထိုသို့သောအခြေအနေများအောက်တွင် ပြည်သူတွင်းလက်တွေ့ကျကျ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများ လုပ်ဆောင်ကာ ပါတီကို ပြည်တွင်းတွင် မည်သို့တည်ထောင်မည် စည်းရုံး တည်ဆောက်မည် ဆိုသည် ကို စဉ်းစားလုပ်ဆောင်ကြရန်လိုပါသည်။ ၈၈ မျိုးဆက်သစ်တို့လို လိုင်းမျိုးပဲသွားပြီး အချိန်တခုယူကာ အင်အားစုစည်းကာ နောက်မှ နိုင်ငံရေးပါတီလုပ်မလား ဆိုသည်ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားကောင်း စဉ်းစားရန်လိုပါလိမ့်မည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအများစုမှာ ယနေ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော အန်အယ်ဒီတို့ အဆင်ပြေစေချင်ပုံရြ့ပီး လွတ်တော်တွင်းမှတဆင့် သူတို့တိုင်းရင်းသားပြသနာများကို ဖြေရှင်းသွားစေလိုသော ဆန္ဒရှိကြောင်းလေ့လာသိရှိပါသည်။ တိုင်းရင်းသားတို့အခွင့်အရေးကို ထိထိရောက် ရောက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နိုင်သူမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ လွဲပြီး မည်သူမှ မရှိသောကြောင့် လွတ်တော်တွင်းတိုက်ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ရေးသည် မရှိမဖြစ်ဖြစ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပါတီမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တတိုင်းတပြည်လုံးအကျိုးအတွက် ပြတ်ပြတ်သားသား ထောက်ခံ ၀န်းရံဘို့လိုပါသည်။
ပြည်သူလူထုမှာ အရမ်းကို နိုးကြားတက်ကြွကြပြီး သူတို့လုပ်နိုင်သော ဖန်တီးနိုင်သော အခြေအနေ အနေအထားအောက်တွင် ဒီမိုကရေစီရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ပြည်သူလုထုမှာ အလွန်စည်းကမ်းရှိကြပြီး အကြောက်တရားလည်း အတော်ကလေးနည်းသွားကြပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော နိုင်ငံအောက်တွင် တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောပြီး စည်ပင် တိုးတက်လာမည်ဟု ယုံကြည်ထားကြသောကြောင့် ဒေါ်စုအား အပြတ် အသတ်ထောက်ခံအားပေးကြပါသည်။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လျှောက်ရသော လမ်းသည် ပန်းခင်းသောလမ်းမဟုတ်ပါ..ပါတီတွင်းပါတီပ အတိုက်အခံပေါင်းများစွာ အခင်အခဲပေါင်းများစွာတို့ကိုရင်ဆိုင်ပြီး အညင်သာဆုံးသော လမ်းကိုရွေးပြီး လျှောက်နေပုံရပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပြင်းအထန်ဆန့်ကျင် သူများမှာ အချို့သော ပြည်ပရောက် ဘေးထိုင်ဘုပြော အူကြောင်ကျား လူပုဂိုလ်များ အုပ်စု များဖြစ်နေသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။
တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်နှင့် ကွန်ပြူတာတက်ကနော်လော်ဂျီ ကြောင့်ပြည်သူတို့ သတင်း အချက် အလက်များ မြန်ဆန်စွာရရှိနေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ကျနော် ကွမ်းခြံကုန်းရှိ ယဉ်ကျေးလိမ်မာ သင်တန်းကျောင်းဖွင့်ပြီး လူ (၈၀) ခန့်ကို စာသင်ကြားနေသော ရွာငယ်လေးတရွာက ဦးပုဇင်းတပါး နှင့်တွေ့ခဲ့ပါသည်။ ထိုဦးပုဇင်းနှင့်စကားစမြီပြောဆိုပီးနောက် ပြည်ပရှိကျနော့် မိတ်ဆွေများကို ယခုလို သတိပေးလိုစိတ်ကလေးပေါ်မိပါသည်။
--- အချို့သောသူတွေကို ကျေးတောသားတွေဆိုပြီးသွားအထင်မသေးလိုက်နဲ့ ကိုယ့်လူတို့ရေ... 2012 မေလမှာ G8 Summit ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း သိတယ်။ ဘာအစ်ရှုးတွေ ဆွေးနွေးမယ် ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်.။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုလည်း ကောင်းကောင်းကြွမ်းကျင်နှံစပ်တယ်။ ပထ၀ီနိုင်ငံရေး ကိုလည်းသိတယ်။ ၈၈ မှာ ပါခဲ့တာလေး ပါတီထောင်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့တာလေး နိုင်ငံခြားမှာသွားနေပြီး Exposure လေးရခဲ့တာလောက်နဲ့သွားမလုပ်နဲ့.. အရယ်ခံရလိမ့်မယ်လို့--- သတိပေးပြောကြားချင်စိတ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပါသည်။ တယ်လီဖုန်းတလုံး တန်ဘိုးမှာဈေးကြီးသော်လည်း ပြည်သူတို့တယ်လီဖုန်း တလုံး ပိုင်ဆိုင်ဘို့ ယခင်ကလောက် မခက်ခဲတော့ပါ။ ရွာတိုင်းလို တယ်လီဖုန်းရှိကြပါသည်။ ရွာအတော်များးများတွင် မီးစက်များဖြင့် တီဗွီကြည့်ကာ သတင်းနားထောင်ကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ယနေ့ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ခေတ်တွင် မြန်မာပြည်က ရွာသူရွာသားများ အတော်ကြီး ခေတ်မီလာကြပါပြီ။
နိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်း ပထ၀ီနိုင်ငံရေး နှင့်မြန်မာပြည်
ယနေ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ညှိနိုင်းတိုင်ပင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေမှုများကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံသည် အမေရိကန်ဦးဆောင်ဆောင်သော အနောက်ကမ္ဘာနှင့် ပိုမိုနီးစပ်သွားပါသည်။ သို့သော် ယနေ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို အတိအကျနားလည်နိုင်ရန် အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ ချို့တဲ့နေသည် ဟုမြင်မိပါသည်.။ ထင်ရှားသော်လည်း အကိုင်အမာဆုတ်ကိုင်လို့မရသောအချက်အလက်များတွင်-
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့်မည်သည့် ကိစ္စများဆွေးနွေးခဲ့သလည်းဆိုသည်ကို ယနေ့ တိုင်မည်သူမျှမသိရသေးပါ။
အမေရိကန်အစိုးရနှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ကြား (၄) နစ်အတွင်းအကြိမ်ပေါင်း (၂၀) ကျော်ဆွေးနွေး ခဲ့သည်ဟု ဟေလာရီကလင်တန်က မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်အတွင်းရုတ်တရက် ထုတ်ဖေါ်ပြောသွားလို့ သိရပါသည်။ ဦးသိန်းစိန်တို့အစိုးရက ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမပြောသေးပါ။ ဘာတွေ ဆွေးနွေးပြီး ဘာတွေ သဘောတူခဲ့ကြသလည်း မည်သူမှ မသိကြသေးပါ။
တရုတ်အစိုးရနှင့် ယနေ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတို့ကြား အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများရှိပါသည်။ ဘာတွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြသလည်း ဘာတွေသဘောတူထားကြသလည်း ကာယကံရှင်များမှလွဲပြီး မည်သူမှမသိပါ။
ထိုကဲ့သို့မသိသည့်အချက်များရှိနေသေးသောကြောင့် မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးလက်ရှိအခြေအနေအား အခြား သူများ ပြောဆိုသည့်အချက်အလက် အခြေအနေများပေါ်တွင် အခြေပြုပြီး ခန့်မှန်းပြောဆိုရုံ မှလွဲပြီး တခြား မရှိပါ။ ကျနော့်ခန့်မှန်းချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ထောက်လှန်းရေး အရာရှိဟောင်း ဗိုလ်မှုးအောင်လင်းထွဋ် ပြောဆိုချက်အရ တရုတ်က ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ဟောင်းသန်းရွှေအား ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းကိုချဲ့ပေးမည်ဟု ကမ်းလှမ်းသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သူပြောကြားချက်ကို စစ်အုပ်စုက ဘယ်လိုမှမတုန့်ပြန်ခဲ့သောကြောင့် မှန်သည်ဟုယူဆရနိုင်ပါသည်။ တရုတ်အားသန်းရွှေက အခြား နေရာများတွင် အစစအရာရာလိုက်လျှောခဲ့သော်လည်း ထိုကိစ္စကိုမှု ငြင်းခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။ တရုတ် အစီအစဉ်မှာ တရုတ်ပြည်၇ှိ ယူနန် ကဲသို့ကုန်းတွင်းပိတ်ပြည်နယ်များ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေးရေလမ်းကြောင်းပွင့်ဘို့ အပြင် အရှေ့တောင်အာရှတွင် တရုတ်သြဇာဖြန့်ကျက်ဘို့ အန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ ကို စစ်ရေး နိုင်ငံရေးအရ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဘုိ့ဖြစ်ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် တိုင်းပြည်တွင်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတညီတည်းမဖြစ်သည့် အခြေအနေအောက်တွင် လူမှုရေး နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုများ ပေါ်လာနေပြီး အခြေအနေ ပိုဆိုးလာမည်ကို တရုတ်က ကြောက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်တရုတ်က ကချင်ပြည်တွင် ရေကာတာ ဆောက်သည့် အစီအစဉ်ဖြင့် ထိုပထမ အစီအစဉ်ကိုဆက်အကောင်အထည်ဖေါ်သည့်သဘောရှိပါသည်။ ရေကာတာမှရေများကို လျှော့ချလိုက်လျှင် ရေမြင့်တက်လာကာ အန္ဒိယသမုဒရာတွင်းမှတရုတ် ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောများ ကချင်ပြည်နယ်ထိ ဆိုက်ကပ်နိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်သည့်သဘောရှိပါသည်။ အခြားတဖက်မှာ လည်း ဂတ်စ် ပိုက်လှိုင်းကို တရုတ်ပြည်သို့ သွယ်တန်းသည့်အစီအစဉ်မကပဲ ပိုက်လိုင်းနဘေးမှ ကားလမ်း ရထားလမ်းများ ဖေါက်လုပ်ရန် အစီအစဉ်လည်း ပါရှိပါသည်။ အစိုးရအကြံပေး ဦးမြင့်တို့ကတော့ ရေကာတာကို မိုင်းဗုံးကြီး တခုသဖွယ်မြင်ပါသည်။ ယခုတော့ ထိုအစီအစဉ်များမှာ ကာလတစ်ခု နှောင့်နှေးသွားခဲ့ပြီး အမေရိကန်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများ မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင် အနီးကပ်ပတ်သက်လာပါပြီ။
တရုတ်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်တို့ အများကြီးခံခဲ့ရပါသည်။ နစ်ပေါင်းနစ်ဆယ်အတွင်း တရုတ်ထံမှ ရလိုက်သည်များမှာ တိုက်လေယဉ်များ အမြောက်ဒုံးကျည်များ တင့်ကားများ စစ်ယန္တယားများ သေနတ်များ စသော လူသတ် လက်နက်များဖြစ်ပြီး ပညာရေး လူမှုရေး စီးပွားရေး နှင့်ပတ်သက်သော အကူအညီများ ဘာမှမယ်မယ်ရရ ကူညီ ဖူးသည်ကိုမတွေ့ရပါ။ သူတို့နှင့်ဆက်ဆံသောကြောင့် သစ်ပင်တွေလည်းကုန် တောကောင်နှင့်တောလည်းပြုန်း သယံဇာတများလည်းကုန်ကာ ပြည်တွင်းစစ်ပိုမိုကြာရှည်ခဲ့ပြီး တိုင်းပြည်မှာ စီးပွားရေးနိုင်ငံရေး လူမှုရေး ကျန်းမာ ရေး ပညာရေးကဏ္ဍများတွင် များစွာနစ်နာခဲ့ရ ပါသည်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ အမေရိကန်ကိုအားပြုပြီး တရုတ်မှခွာပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒါကိုပံပိုးကူညီရင်း မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလည်းကို ပုံဖေါ်ယူပါသည်။ ပိုတော့ရှုတ်လာသည် သို့သော်တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းသည်ဟုမြင်ပါသည်။ သို့သော် ကျနော့်သဘောအရ ကျနော်တို့နိုင်ငံ နှောင်ကြိုးကင်းပြီး ကျနော်တို့နိုင်ငံအဖက်ဖက်မှ အကျိုးရှိရေးမည်ဆိုလျှင် မည်သည့်နိုင်ငံတိုင်းပြည်နှင့်မဆို အလုပ်ဖြစ် စေချင်ပါသည်။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရတွင်း အာဏာပြိုင်ဆိုင်ကာရှုတ်ထွေးမှုများရှိပါသည်။ အန်အယ်ဒီတွင်းတွင်လည်း ထိုနည်း အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းပြည်သည် တိုင်းရင်းသားရေးရာပြသနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ တိုင်းပြည်တွင်ရင်ဆိုင်နေရသောပြသနာများသည် အလွန်ရှုတ်ထွေးသောကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ညင်ညင်သာသာနှင့် လုပ်ကိုင်နေရသော Mission တခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါကကျနော်ရရှိထားသော အချက် အလက်များကို စုစည်း ပုံဖေါ်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏ စာအားပေးပို့အပ်ပါသည်။
စာရရှိပါလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ရရှိကြောင်း အကြောင်းပြန်ကြားပေးစေလိုပါသည်။
ရေးသားသူ - ---- at Monday, May 07, 2012
သြစတေးလျက အိမ်ပြောင်းတဲ့အတွေ့ အကြုံ
လေယျာဉ်စီးရတာ အရမ်း ခေါင်းကိုက်တယ်။ အထူးသဖြင့် အဆင်း၊ အတက် မှာ ဆိုရင် နားတွေအူလာတယ်။ ဒီလိုအူလာရင် နှာခေါင်းကို ပိတ်ပြီး မှုတ်ထုတ်လိုက်မှ သက်သာတယ်။ လေယျာဉ်ပေါ်က ဆင်းပြန်တော့လည်း ခေါင်းကမှုးလာတယ်။ ဒီဒဏ်ကို လုံးဝ မခံစားနိုင်ဘူး။ စီးရတဲ့လေယျာဉ်ကလည်း တစ်လမှာ လေးငါးခေါက်လောက်ဆိုတော့ ကြာလာရင် ငါ့ခေါင်းတွေကွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတောင် တွေးမိတယ်။
ဒါက အလုပ်သွားတဲ့နေ့ နဲ့ အိမ်ပြန်တဲ့နေ့ တွေမှာ ဖြစ်တဲ့ ခံစားချက်ပါ။
အရင်တုန်းက လေယျာဉ်နဲ့ အလုပ်သွား အလုပ်ပြန်ကို သဘောကြလို့ မိုင်းမှာ လုပ်တဲ့အလုပ်ကို ရွေးပြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ ကြာလာတော့ ရိုးအီသွားပြီ။ လေယျာဉ်စီးရတာ လန့် လာပြီ။ နားအူလာလို့ ။
မိန်းမနဲ့ ခလေးတွေက မိုင်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်နေရာမှာ နေတယ်။ ကျနော်က သူတို့ နဲ့ ဝေးပြီး အလုပ်လုပ်တယ်။ တပတ်တခါမှ အိမ်ပြန်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်က အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ခလေးတွေက ကြီးလာသလိုခံစားရပြန်တယ်။ ဒါနဲ့ တခုခုတော့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှ ရမယ်ဆိုပြီး မိုင်းကို တအိမ်လုံးပြောင်းဖို့ စဉ်းစားရတော့တယ်။
သြစတျေးလျက မိုင်းဆိုတာက တောထဲမှာ။ လူတွေနဲ့ အရမ်းဝေးတယ်။ တောမြို့ ထဲမှာ နေတဲ့ အိမ်ခြေက လေးငါးဆယ်လောက်ပဲရှိတယ်။ အများစုက အလုပ်သမားတွေ။
ကျနော်လုပ်တဲ့ အလုပ်ရဲ့ မြို့ က အတော်သေးတယ်။ မြို့ တော့မဟုတ်ဘူး။ တော ရွာလေးပေါ့။ ရွာထဲမှာ အရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်။ ဈေးဆိုင်တစ်ခု။ စာတိုက်တစ်ခု။ အကုန်လုံးက တစ်ခုစီပဲရှိတယ်။မြို့ ကြီးတွေမှာ အစုံရှိပေမဲ့ ကျနော့်ရွာမှာ ဘာမှမရှိဘူး။
တစ်ရွာလုံးမှာ ဗမာဆိုလို့ ကျနော်ပဲရှိပါတယ်။ ရွာသားတွေအကုန်လုံးက အရမ်းကို ဖော်ရွေတယ်။ လမ်းမှာ ကားမောင်းသွားရင် တွေ့ တဲ့ လူတိုင်း လက်ထောင်ပြတယ်။ ဒါက သူတို့ ဓလေ့အရ နုတ်ဆက်တာ။ ဖော်ရွေပြတာ။ အရေးအကြောင်းဖြစ်ရင် အကုန်လုံးလာပြီး ကူညီပေးတယ်။ တခါတုန်းက အိမ်ကို မီးလောင်တော့ ရွာသားတွေအကုန်လုံး မီးလာငြိမ်းပေးတဲ့ အထိကောင်းတဲ့ ရွာသားတွေ။ အရမ်းညီညွတ်တယ်။
ဒီရွာကို ကျနော်တို့ မိသားစု ထပ်ပြောင်းရပြန်ပြီ။ အလုပ်က မန်နေဂျာကို ကျနော်ပြောင်းတော့မယ်ဆိုပြီး အီးမေးနဲ့ လှမ်းပြီး ရေးလိုက်တယ်။ သူက ချက်ချင်း HR ဌာနကို ဆက်သွယ်တယ်။ သူတို့ ကနေတဆင့် အချိန်မှီပြောင်းလို့ ရအောင်စီမံပေးတယ်။ နေရမဲ့အိမ်။ အိမ်ပြောင်းဖို့ ကား။ လေယျာဉ်လက်မှတ်တွေကို ဘွတ်ကင်လုပ်ပေးတယ်။ အကုန်လုံးက အခမဲ့။ Company က ပေးတယ်။
ကျနော်က ဗမာဆိုတော့ အိမ်ရွေးတဲ့ အခါမှာ ကျနော်တို့ ထုံးစံအတိုင်း အားနာတယ်။ ကြိုက်တဲ့အိမ်ကိုပေးပါ။ အခန်းသုံးခန်းပါရင် ရတယ်။ ခလေးတွေနဲ့ အတူအိပ်တာဆိုတော့ အခန်းအများကြီးမလိုဘူး။ ဒီလို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သုံးခန်းပါတဲ့ အိမ်ကို တောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ထုံးစံအရ ခလေးသုံးယောက်ဆိုရင် လေးခန်းပါတဲ့ အိမ်မှာနေရမယ်။ လင်မယားတစ်ခန်းနေရမယ်။ ဒီလိုမျိူး။ ရတယ်။ ပိုတောင်ကောင်းသေးတာပေါ့။ ဒါနဲ့ သူတို့ ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတာ ပိုကောင်းတယ်။
အိမ်ပြောင်းဖို့ အတွက်ကို ကားကအစ၊ အစစအရာရာ စီမံတဲ့အခါမှာ အလိုအပ်ဆုံးက တယ်လီဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်ရှိရင် အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ ဖုန်းဆက်တယ်။ အီးမေးပို့ တယ်။ လူကိုယ်တိုင်းသွားစရာမလိုဘူး။ ပြောင်းစရိတ် ဒေါ်လာ ငါးထောင်ကို Company က အင်တာနက်ကနေလွှဲပေးလိုက်တယ်။ ဒါပဲ။ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမရှိဘူး။
ပြောင်းတဲ့နေ့ ရောက်ရင် အိမ်ရှေ့ မှာ ထရပ်ကားထိုးတယ်။ ပစ္စည်းတင်တယ်။ နောက်တစ်စီးက ကျနော်စီးတဲ့ကားကို လာပြီးသယ်တယ်။
ကျနော်နဲ့ ကျနော့်မိသားစုက အဆင်သင့်စီစဉ်ထားတဲ့လေယာဉ်နဲ့ ကိုယ်နေမဲ့အိမ်မှာ သွားစောင့်ယုံပဲ။ တစ်နာရီပဲစီးရတယ်။ သေးတစ်ချက်ပေါက်တာနဲ့ အိမ်ကို ရောက်လေသတည်း။ ဒါမျိူး။ ဒါက သြစတျေးမှာ လုပ်တဲ့မိုင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ အိမ်ပြောင်းတဲ့ပုံစံ။ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်လဲ။
ကျနော်ပြောင်းတဲ့ ရွာမှာ ကိုယ်က အကြာကြီးနေစရာမလိုပါဘူး။ ပျင်းလာရင် အလည်သွားဖို့လေယျာဉ်ရှိတယ်။ တစ်လကို တစ်ခေါက်၊ မြို့ ထဲကို သွားလည်ဖို့ အတွက် အလုပ်က စီစဉ်ပေးတယ်။ စနေနေ့ ညတိုင်း ရွာထဲမှာ DJ နဲ့အရက်သောက်တယ်။ က တယ်။ ခုန်တယ်။ ပွားတယ်။ နေ့ ကြီးရက်ကြီးမှာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကိုလုပ်ပေးတယ်။ အကုန်လုံးအခမဲ့။ ဘီယာနဲ စားစရာတောင်ပါသေးတယ်။
ရွာက အိမ်တွေကို ဘယ်သူပိုင်တာလဲလို့ မေးရင် အလုပ်က ပိုင်တယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ ကုမ္မဏီက ပိုင်တယ်။ ရွာတစ်ခုလုံးမှာ ရှိတဲ့ အိမ်တွေ၊ ဆိုင်တွေကို ကုမ္မဏီက ဆောက်ထားပေးတယ်။ အစိုးရနဲ့ လုံးဝမဆိုင်ဘူး။ အစိုးရရဲ့ အလုပ်က Law ပဲ။ ဒီလောကို ကုမ္မဏီတိုင်းက လိုက်နာ။ မလိုက်နာနိုင်ရင် "လာ" ထားပဲ။ ငွေကို သန်းနဲ့ ချီပြီးလျှော်။ ဒီလိုမျိူးဆိုတော့ ဘယ်သူမှ စည်းကမ်းကို ပေါက်ကရမလုပ်ရဲဘူး။ လုပ်တဲ့လူ လျှော်ထားပဲဆိုတော့။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်လား။ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်လား။ ထိတာနဲ့သန်းနဲ့ ချီပြီလျှော်။ ဆိုတော့ ဘယ်ကုမ္မဏီမှ မလုပ်ရဲဘူး။
ဘယ်လောက်ထိ စည်းကမ်းကြီးလဲဆိုတာကို ပြောပြချင်တယ်။ မိုင်းမှာ သြစတျေးလျတွေရဲ့ စည်းကမ်းနဲ့ ပက်သက်ပြီးပြောတာပါ။ သူတို့ က ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အမွေအနှစ်တွေကို တန်ဖိုးထားတယ်။ စောင့်ရှောက်တယ်။ သူတို့ ယဉ်ကျေးမှုက ကျနော်တို့ ဗမာတွေလို ဘုရားတွေတည်တာ မဟုတ်ဘူး။ အဆောက်အဦးတွေမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ အမွေအနှစ်တွေက ကျောက်တုံးတွေ။ ကျောက်တွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အမဲလိုက်တဲ့လက်နက်တွေ။ ဒီဟာတွေက သြစီအနှံ့ အပြားမှာ နေရာတကာရှိတယ်။ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေက နေရာတကာ အိမ်မရှိပဲ လှည့်နေတာဆိုတော့။
ကျနော့်မိုင်းနားမှာ ကျောက်တုံးကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ ဒီအတုံးကြီးက သူတို့ ရဲ့ အမွေအနှစ်။ အဲဒိတုံးကြီးမှာ ပန်းချီတွေရေးထားတယ်။ ဒါကို သူတို့ က အရမ်းတန်ဖိုးထားတယ်။ အလုပ်ထဲမှာ အလုပ်သမားတိုင်းကို မလုပ်ခင်မှာ Induction လုပ်ပေးရတယ်။ ဘာကို လုပ်သင့်တယ်။ ဘာကိုမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ မိတ်ဆက်ပေါ့။ ဒါက အစိုးရရဲ့ ဥပဒေ။ ဒါမှ မသိတဲ့ သိမယ်။
အလုပ်သမားတစ်ယောက်က မိုင်းကိုရောက်လာတယ်။ သူက အင်္ဂလိပ်၊ သြစီအစစ်။ သူက ငပြောင်။ ဘယ်ဟာကိုမှ တန်ဖိုးမထားဘူး။ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေ ဘာတွေ နားမလည်ဘူး။ ဒါနဲ့ ကျောက်တုံးကြီးကို သွားပြီး သူ့ လက်ဝါးနဲ့ ကပ်တယ်။ ပြီးတော့ လက်ဝါးကို သင်္ဘောဆေးဖြန်းတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရင် လက်ဝါးရာက ကျောက်တုံးကြီးမှာ ကပ်နေတာပေါ့။ သူ့ အထင်က ဒီလိုလုပ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ ထင်တယ်။
Induction မှာ ဥပဒေအရ ဒီလိုလုပ်ရင် အပြစ်ရှိတယ်လို့ ဆိုပြီး ပြဌာန်းထားတယ်။ ဒါကိုလည်း သူသိတယ်။ သို့ သော် လုံးဝကို သူက ဂရုမစိုက်ဘူး။ လူငယ်ဆိုတော့။
တနေ့ တော ဌာနေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ က လာတယ်။ သူ့ ကျောက်တုံးကြီးမှာ ဘယ်ကဘယ်လို လက်ဝါးကြီးရောက်နေလဲဆိုပြီး ကုမ္မဏီကို မေးတယ်။ ဒီမှာ အလုပ်က လူကြီးတွေက အင်စပတ်ရှင်လုပ်တယ်။ အင်ဗက်စတီကေးရှင်းလုပ်တယ်။ လုပ်တဲ့ကောင်ကို နာရီမဆိုင်းပဲ သိသွားတယ်။ ဒါနဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ က အလုပ်ကို တရားစွဲတယ်။
နောက်ဆုံး Company က ဒေါ်လာ တစ်သိန်းခွဲလျှော်ရတယ်။ လုပ်တဲ့ကောင်က ထောင်ရှစ်လကျတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်တစ်ခါ ဘယ်တော့မှ မိုင်းမှာ အလုပ်မရတော့ဘူး။
ဒီအကြောင်းကို ပြောပြနေတဲ့ ကျနော်မန်နေဂျာကို ကားထဲမှာ ကျနော်က မေးတယ်။
"ဘာလို့ ဒီလိုလုပ်တာလဲ။ လက်ဝါးရာကို ပြန်ဖျက်လို့ ရတာပဲ"
"ဒီလိုလုပ်မှ နောက်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ မလုပ်ရဲမှာ။ သင်ခန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ ပေါ့"
ဒါက သြစီတွေရဲ့ စည်းကမ်း။
အလုပ်သမားတိုင်းရဲ့ ရပိုင်ခွင့်လည်း အပြည့်အ၀ပေးသလို။ စည်းကမ်းကိုလည်း မထိနဲ့ ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုလည်း မထိနဲ့ ။ ထိတာနဲ့ ဘယ်သူမှ ခွင့်မလွှတ်ဘူး။
ဒီဥပမာနဲ့ ဗမာပြည်က မိုင်းတွေ၊ စီမံကိန်းတွေနဲ့ ယှဉ်မိတယ်။ ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး စာဖတ်သူများ ပြောတဲ့ ကွန့် မန့် ကိုပဲ စောင်မျှော်ပါတော့မယ်။ ကျနော်ပြောရင် မကောင်းမြင်တဲ့စိတ်များနေတယ်ဆိုပြီး ပြောမှာစိုးလို့ ပါ။
အခု ဒီစာကို ကျနော့်ရဲ့ ရွာကနေ ရေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - ---- at Sunday, May 06, 2012
နိုင်ငံတကာစကားကိုလည်း သူတို့ တတ်ပါတယ်
ရေးသားသူ - ---- at Friday, May 04, 2012
ထောက်ခံလားလို့ မေးရင်....အသားကုန်ထောက်ခံတယ်လို့ ပြောမယ်
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Vfm8PAUbEaw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
ရေးသားသူ - ---- at Thursday, May 03, 2012
မိန်းမတွေရဲ့ နှလုံးသားက ကိုယ်တော်ချောတွေနဲ့ မတူတာတော့ အားလုံးသိမယ်ထင်တယ်။ သူတို့ တွေဟာ သနားတတ်တယ်။ ကြင်နာတတ်တယ်။ ကြောက်တတ်တယ်။ မိန်းခလေးတွေကို သနားအောင်ပြောတတ် နေတတ်တဲ့ ဘဲ တွေဟာ အများအားဖြင့် ကြွေ သွားလေ့ရှိတယ်။ ရည်းစားထားတဲ့အခါတိုင်း မိန်းခလေးကို သွားပြီး ဟဲ့...ကောင်မ ငါ့ကို ချစ်စမ်းပါဆိုရင် ဘယ်သူမှ ချစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ဘဲ တွေက ချစ်စကား ဆိုရင် အနဲဆုံး ဒီလိုပြောတတ်ရတယ်။
အီစီကလီ ခပ်နွဲ့ နွဲ့ သာပြော။
အပြောင်းအလဲများတဲ့ သူတွေဟာလည်း မိန်းခလေးတွေပဲ။ စကားကို ဗလောင်းဗလဲပြောတက်တာလည်း သူတို့ ပဲ။ အားလုံးတော့မဟုတ်ပါ။ ကျားနဲ့ မတူတဲ့အချက်ကိုပြောတာပါ။ အဆိုးဆုံးက အတင်းလည်း ပြောသေးတယ်။ သူတို့ စရိုက်ပေါ့။
အသက်ကြီးတဲ့ မိန်းခလေးကို ငယ်တဲ့သူက ချစ်ရေးဆိုရင်...မ...ရယ်...မ..ကိုလေ တနေ့ မှ မေ့လို့ မရဘူး။ အရမ်းချစ်တယ်ကွယ်...ဘာညာဆိုပြီး ရွှီးကြည့်။ အနဲဆုံးတော့ အဲဒိ့စော်...မပျော်ရင် ကျနော့်ကို ကြိုက်သလိုသာပြော။
တစ်ခါတလေကြရင် မာနအရမ်းကြီးတဲ့ မိန်းခလေးကို ခဏခဏ သူရှေ့ မှာ ရိုသေပြ၊ ကျိူး နွံ့ ပြရင် မာနကြီးလည်း ခဏပဲ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ မိန်းမဆိုတာ နှာခေါင်းမပါဘူးလို့ ဆိုပြီး ရှေးစကားရှိတာ အားအားယားယား မဟုတ်ပါ။
မိန်းခလေးတွေ အသက်ကြီးလာရင် ပိုပြီး ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ စိတ်ပညာရှင်တွေကပြောတယ်။ ဥပမာ ..စိတ်ဆိုးပြီး အမွေပြတ်စွန့် လွှတ်လိုက်တဲ့သားသမီးတွေကို အသက်ကြီးမှ ပြန်ခေါ်တာကို လေ့လာကြည့်ပါ။ နောက်တစ်ခုက မိန်းမတွေဟာ သူ့ တို့ မှာ ခွင့်လွှတ်တက်တဲ့စိတ်က သူများနဲ့ မတူဘူး။ သူတို့ ကိုသာ တောင်းပန်ကြည့်၊ မျှောက်ပြောကြည့် ခင်ဗျားတို့ ကို ခွင့်လွှတ်လိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာပေါ်က အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ မိန်းမဦးဆောင်တဲ့အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဘယ်သူရှိလဲ။ ကျနော်တော့ဒေါ်စုပဲ ရှိတယ်လို့ ထင်တယ်။ ရှိတဲ့အမျိူးသမီးခေါင်းဆောင်တွေက အာဏာရပြီး နိုင်ငံရေးကို လက်တွေ့ ကြကြလုပ်နေတဲ့ သူတွေ။ အကြမ်းဖတ်အမျိူးသမီးခေါင်းဆောင် ဘယ်နှစ်ယောက်တွေ့ ဘူးလဲ။ နောက်ဆုံးအထိ သူပုန်ခေါင်းဆောင်အမျိူးသမီးလည်း မရှိသလောက် ရှားတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ အထက်ကပြောတဲ့ ကြင်နာတာတို့ ဖင်နာတို့ က ကျား တွေ ထက်ပိုများတယ်။ ကျားတွေက သူတို့ ထက်ပိုပြီး မာတယ်။ ပြတ်တယ်။ ချစ်တာ မေတ္တာ ကွမ်းသီးတွေက သိတ်အရေးမကြီးဘူး။ အိုင်တွေ့ ရင် ခြေဆေးတာတင်မကဘူး ရေပါကူးတဲ့ ကောင်တွေ။ ဆိုတော့ ကျားနဲ့ မ မတူဘူး။
ကျနော့်ရဲ့ အတွေးက အန်တီပဲခေါ်ခေါ် အဒေါ်ပဲပြောပြော "တီဒေါ်စု" ယနေ့ မှာ လွှတ်တော်တွင်းကို ဝင်တာ သူ့ စရိုက်နဲ့ ပိုပြီး လက်တွေ့ ဆန်တယ်။ ဟန်ကြတယ်။ ဒါမှ သူ့ ရဲ့ တော်ကီတွေနဲ့ နွဲ့ လိုက်ရင် စစ်သားတွေ အကုန်လုံး ကြွေသွားနိုင်တယ်။ နောက်ဆုံး မိန်းခလေးက တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချူပ်ရင် အကြင်နာတွေများတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးပိုရနိုင်တယ်။ မိန်းခလေးက ကျားတွေထက် ပိုပြီး စေ့စပ်တယ်။ စီမံခန့် ခွဲမှုမှာ စိတ်ရှည်တယ်။ ကျားတွေလို အနည်းဆုံး အရက်မှုးပြီး စောက်ရမ်းမလုပ်ဘူး။ ဥပမာ မြန်မာအိမ်ထောင်စုတိုင်းမှာ မိန်းခလေးတွေက ငွေကိုင်တယ်။ အိမ်ထောင်ကိုထိန်းသိမ်းတယ်။ ကျားတွေက အရက်ဆိုင်နဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ အချိန်ကုန်တယ်။ ဒါတွေကိုလေ့လာပြီး နိုင်ငံရေးနဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်တော့ အန်တီစု ဟာ လွှတ်တော်နဲ့ တန်တယ်။ အာဏာရှိတာက ပိုကောင်းတယ်။ အာဏာမမက်ဘူးဘာညာမပြောနဲ့ ။ လူတိုင်းမက်တယ်။ ယူလည်းယူသင့်တယ်။
ဒီကေဘီအေက ကျားကြီး ဗိုလ်နုတ်ခမ်းမွှေးကို လွှတ်တော်တက်ခိုင်းကြည့်ပါလား။ သူလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူက ကျား ဆိုတော့ ခပ်ကျားကျားနဲ့ ပဲ သင့်တော်တယ်။ ဒီနေရာမှာ ဦးသိန်းစိန်တို့ အဖွဲ့ ကြတာရောလို့ မေးရင် အဖြေက ဒီလိုရှိတယ်။ စစ်သားလည်းဖြစ်ပြန် ကျားလည်းဖြစ်ပြန်တော့ မြန်မာပြည်က စုတ်ပြတ်သွားရောလို့ ။
နေရာမှားနေတယ်လို့ ကျနော်ခဏခဏ ပြောဘူးတယ်။ ဥပမာ ဆရာဝန်က ဆရာဝန်မလုပ်ပဲ စာရေးစားတယ်။ ဘလော့ဂါလုပ်တယ်။ ဥပမာ မောင်လွဏ်းဆွေ ကိုပဲ ကြည့်ကြည့်။ ကိုတာကိုလည်းထပ်ကြည့်အုံး။ နေရာတိုင်းလိုလိုပဲ။ စစ်သားကလည်း စစ်သားမလုပ်ပဲ ဖင်ယားပြီး လွှတ်တော်တက်တော့ ဘာသုံးရလဲ။ ဘာမှ သုံးရမရတဲ့အပြင် လွှတ်တော်ထဲမှာ အိပ်ငိုက်ပြီး ပါးစပ်က သားရည်တွေကထွက်၊ အာပုတ်နံ့ က တထောင်းထောင်းနဲ့ အခြားသူတွေကိုတောင် ထိခိုက်သေးတယ်မဟုတ်လား။ အချိန်ကုန်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ အမှန်မှန်ဆို လူတွေအားလုံးက ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်လုပ်ရမှာ။ အခုတော့ စောက်တလွဲတွေက နေရာတကာပဲ။
ဒါ့အပြင် အရမ်းကို ရက်စက်တဲ့ ဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေရဲ့ သေနတ်ကို အာခံပြီး အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူဟာလည်း အမှန်မှန်ဆို ကျားပဲ ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါမှ တုံးတိုက်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက် အခြေအနေမျိူးဖြစ်မှာ။ အခုတော့ မိန်းခလေးဖြစ်နေတော့ အကြင်နာတွေ၊ ခွင့်လွတ်တာတွေ၊ ကြေအေးပါတယ်ဆိုတဲ့ နှလုံးသားတွေနဲ့ ဆိုတော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးက လစ်ဗျားလို ဟိုကောင့်ဖင်ကို ဒုတ်နဲ့ ထိုးလို့ မရဘူးပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် အရမ်းသနားတက်တဲ့ ကျနော့်အမေ မဟုတ်တဲ့ အမေစုအနေနဲ့ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ ပဲ အရမ်းကို သင့်တော်ပါကြောင်း ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သာ အမေစုဟာ နေရာမှာ ကျားတစ်ကောင်သာဖြစ်ကြည့် အခုလောက်ကြာမှာမဟုတ်ဘူး။ ခက်တာက ပြည်သူကလည်း ဒေါ်စုကိုမှ ဘုရားထင်နေတာဆိုတော့ဗျာ။ ကံသိုလ်ကံပေါ့လို့ ပြောရမလိုပဲ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, May 03, 2012
ပြည်သူ့ ဆန္ဒအရ ကျမ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်
ပြည်သူ့ ဆန္ဒအရ ပါတီခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်
ပြည်သူ့ ဆန္ဒအရ ၉ဝ-မှာ ဝင်ရွေးခံဖို့ ကျိူးစားတယ်
ပြည်သူ့ ဆန္ဒအရ အမျိူးသားညီလာခံကို သပိတ်မှောက်တယ်
ပြည်သူ့ ဆန္ဒအရ ၂ဝ၁ဝ-ကို ဆန့် ကျင်တယ်
ပြည်သူ့ ဆန္ဒအရ ၂ဝဝ၈-ကို လက်မခံခဲ့ဘူး
ပြည်သူ့ ဆန္ဒအရ ၂ဝ၁၂-မှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်
ပြည်သူ့ ဆန္ဒအရ ကာကွယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ဆန့် ကျင်တယ်
ပြည်သူ့ ဆန္ဒအရ ပါလီမန်ကို သုံးရက် တိတိ သပိတ်မှောက်တယ်
ပြည်သူ့ ဆန္ဒအရ မပြောင်းလဲ ကျမ်းကျိန်မယ်
ပြည်သူ့ ဆန္ဒအရ လွှတ်တော်တက်ပါတောမယ်
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, May 01, 2012
တချိူ့ သော သူငယ်ချင်းတွေက ကျနော် မိုင်းမှာ ဘာလုပ်...
ထောက်ခံလားလို့ မေးရင်....အသားကုန်ထောက်ခံတယ်လို့ြေ...